Runta Madow ee Nolosha Gabdhaha Iskoolleyda Dalka Japan | HimiloNetwork
Runta Madow ee Nolosha Gabdhaha Iskoolleyda Dalka Japan
Posted by: Zakariya in Wararka January 2, 2016	0 541 Views
Tokyo (Himilonews) – Habeen dhaxan iyo dhibic roobaad gudaha Tokyo – Gabdhaha iskuuleyda Japaaniiska waxay ku saftaan waddooyinka.
Iyaga oo ku qarqaraya daba-gashiyo gaagaaban, waxay qeybiyaan waraaqo-xayeysiis ay leeyihiin maqaayado ay howl-wadeenno ka yihiin tiro gabdho iskuulley ah oo ilaa 16-jir da’yar – halkaas oo niman da’aad ah ay lacag ku dhiibaan adeeggooda.
“Badigood waxay ku jiraan da’aadda 30, 40, 50,” ayay tiri 18-jirad lagu magacaabo Hanoka.
Gabdhaha, oo gebigood ku wada labisan maryaha caadiga ah ee iskuulkooda ‘Uniforms’, waxay helaan ku dhawaad 8$ saacidiiba say u madadaaliyaan una siiyaan cunto iyo cabitaan niman wax ka badan laba-jibbaar da’dooda ka weyn.
Mararka qaar si kastaba, nimanku waxay doonaan wax ka badan haasaawe iyo madadaalo.
16-jirad lagu magacaabo Eli waxay sheegtay in macaamiishani ay warsadaan gabdhaha inay xiriir la yeeshaan inta badan.
Halka maqaayadaha qaar, sida midka Eli iyo Honoka ka howl-galaan ay si adag u mamnuucaan shukaansiga iyo kala hadalka macmiilka wax ka baxsan shaqadiisa, wali waxaa jira dhinac dhibaato leh oo JK ama gabdhaha iskoolleydu wajahaan.
CNN-ka ayaa caadka-soo dhigay gabdho iskoolley ah iibiya masaajooyinka, dharka isla eg ‘uniforms’ iyo xittaa hoos gashiyo ama buumooyinka.
Gabdho kalana waxaa loogu dowgalay in xiriir galmood lala yeesho taas oo xukuumadda iyo waaxyaha u ol’oleeya dhibanayaasha galmada lagu nitaaqo ay aalaaba ka digayaan inay sababi karto kufsi caruureed.
“Marba haddii aad ka dagto dukaanka, xittaa tallaabta hore, waad sameyn kartaa wixii aad doonto,” mid kamid ah qareen u dooda dhibanaha galmada lagu dhacay ayaa yiri.
Warbixinno dhawaan laga soo saaray dad-ka-ganacsiga, waaxda dalka ee USA ayaa ka digtay in shabakado xiriirsan oo sharmuuteysi habeynsan agaasimay ay bartilmaameedsadaan dumarka iyo gabdhaha dhiban ee Japaan.
‘Enjo Kosai’ ama ‘Xiriir-galmood Meg-dheban’, ayay tiri warbixintu, waxay ku socotaa fududeynta sharmuuteysiga gabdhaha yaryar ee reer Japan.
Reebanaanta nuxur ee hal-xishoodka iyo eedeynta dhibanaha gudaha isla dhaqanka Japan wuxuu kahor tagay gabdho badan inay usoo bareeri waayaan caddeynta waxa lagula kaco, sida uu tilmaamayo Shihoko Fujiwara, oo agaasime ka ah Xarunta Dhibanayaasha Dadka-ganacsiga ee Lighthouse.
-Jinsi-dhaanka Caruurta ‘Child Pornography’-
Japan waxaa muddo badan ka jiray xiriir aad fududeyn oo ku aadan galmashoodka ‘Sexualization’ caruurta reer Japan. Waxay kaliya aheyd bishii June sanadkii 2014-ka, markii Japan ay ugu danbeyn laashay lahaanshaha ama milkiyadda Jinsi-dhaanka caruurta.
Xittaa in-kasta oo dowladdu laashay fikirka jinsi dhaanka carruurta, hadana tani wali ma joojin karto falalka lagula kaco carruurta reer Japan, sida uu tilmaamayo geyfane Japaaniis.
Gudaha Tokyo, ku dhawaad maqaayad kasta, waxaa laga soo tebiyaa falal liddi ku ah bad-qabka gabdhaha iyo haweenka – halkaas oo marar kufsi iyo galmo sandulleyn ah lagula kaco. Taas oo ka dhalata doorka ka ganacsi ee gabdhaha da’yar ah – qaab soo dhaweyn.
Sanadkii 2013, wax ka badan 6,400 oo carruur ah waxay dhibane u noqdeen danbiyo galmood oo ay ku jirto 1,644 kiisas oo jinsi-dhaan caruureed ah iyo kiisas kale oo ku saabsan sharmuuteysiga carruurta, marka loo eego NPA.
Badi – 85% ee kiisaska jinsi-dhaanka carruurta waxaa lala xiriirshay internet-ka, marka loo eego Bileyska Qaranka. CNN-ka ayaa soo helay fiidiyaal lagu iibiyo baqaarrada waaweyn ee Tokyo kuwaas oo ay ka muuqdaan gabdho yar-yar oo xittaa heerka hoose ee dugsiga ku jira kuwaas oo, sida cad, dihintooda loo dhaco.
Ururrada iyo geyfanayaasha la dagaallama jinsi-dhaanka carruurta ayaa dowladda ugu yeeray inay qaado tallaabo kale oo ay ku hubsaneyso bad-qabka dhibanayaasha da’yarta ah – taas oo in xakame-adag lagu taxaabo kuwo iibiya iyo kuwa adeegsada jinsi-dhaanka carruurta ‘child porn.’
“Majirto wax diidaya in Japan ay ku hartay dulqaadka jinsi-dhaanka, oo aysan tallaabo adag ka qaadin kuwo ku guda-jira,” ayay ku yiraahdeen nuxur ay qalinka saareen tiro NGO-ley ah oo uu ku jiro Lighthouse.
Waxay ururradani nuxurkooda ugu yeereen dowladda inay laasho gabdhaha iskoolleyda ah ee loo adeegsado mashiin dhaqaajiya aqabyada shirkadaha sida masaajada, buumooyinka iyo wada socodka xiriir-galmood ee gabdhaha aan wali u bislaan isu-golaadiska jinsiga ku lidka ah.
-Macmiishu dhib uma arkaan tani-
Ragga macmiisha ka ah maqaayadaha Tokyo ee ‘JK’ waxay sheegeen inay ku arkin wax qaldan oo ku saabsan ganacsigaas.
Ninka mid ah, oo ah xaas bunni jaamacadeed ah oo ku jira da’diisa 40-jir, ayaa CNN-ka u sheegay inuu cilmi-baaris ku sameynayey jiilka soo koraya.
Maanu hubin hadduu raaxo dareemayo haday gabadhiisa oo 12-jir ah ay ka shaqeyn laheyd maqaayadaha Tokyo ee gabdhaha sikoolleyda da’yarta ah ka yihiin howl-wadeenno. Wuxuu ku hal-adkeysanayaa in wax qaldani aysan ka dhicin maqaayadaha.
“Hadday inantaydu joogi laheyd halkan, ugu yaraan waan kormeeri lahaa,” ayuu yiri.
Mid kale, oo ku jira da’da 30-jir, ayaa sheegay inuu maareeyey ganacsi lamid ah JK isaga oo yimaada toddobaad kasta maqaayadda ay CNN booqatay waayo “waayo waa reynreyn.”
Wuxuu hoosta-ka-xariiqay inay jiraan heerar ismaan-dhaaf galmood ah oo ku hareersan leyliga ‘practice’ hayeeshe wuxuu sheegay in ismaan-dhaafku uu mar un yimaado deedna fal-galo.
Zakariya Hassan Hiraal.
Previous: Q2aad: Nolosha iyo Aqoonta Goroyada
Next: Markay Gabadhu Rabto Inay Wax Dhasho–Hooyo noqoto
Feeryahanka Muslimka ah Maxamed Cali Kalaay oo u jawaabay Donald Trump
Somaliland executes three people in less than a week